उ’सको सा’मान देख्दा मलाई भित्रै देखि……..भयो – Sidha Post 24
Publisher - News & Entertainment
उ’सको सा’मान देख्दा मलाई भित्रै देखि……..भयो
By admin On Nov 17, 2021
त-रु”नी”सँ-ग बोल्न पाएपछि केहि चाहिंदैन है तपाईंलाई रु’ बाटोमा हिड्दै गर्दा उनले एकासी प्रश्न गरी । ‘लौ को त “रुनी”सँग बो लें र म ? मैले मुस्कुराउँदै सोधें ।
अघि अफिस आएकी त्यहि बबिता ! कति नखरमाउली ! कति मस्केकी तपाईंसँग ! कम्ता रि-स उ-ठेको थिएन । लौ ! किन रि-स उ-ठ्यो तिमीलाई । उ मेरो मिल्ने साथी हो ।
साथी मात्रै ? उनी झन् रि-सा-ए-र बोली । ‘हो त साथी मात्रै ! मैले जवाफ फर्काएँ । ‘कति भो भेटेको ? उनले फेरी सोधी । ‘अँ ! त्यस्तै एक बर्ष मैले पूरानो अफिस छोड्नु र उनी त्यहाँ आउनु एकै पटक भएको थियो । सामान्य चिनजान हो । पढ्न भनेर काठमाडौँ बसेकी छे ।
मैले स्वाभाविक उत्तर दिएँ । ‘अनि किन आएकी त हाम्रो अफिसमा ? ‘उसलाई फोटोशप सिक्नुथियो । मलाइ अलिअलि आउँछ, त्यहि भएर सिक्ने आएकी हो ।
अहँ मैले पत्याईन, त्यो तपाईंको साथी मात्र हो भनेर ! ‘त्यस्तो हुन्न यार १ कहाँ उनी त मेरी साथी बाहेक कोहि पनि होइन नि ! मेरो जवाफ सुनेपछी उनी बोल्न थालिन्, ‘ मपनि २३ बर्षको भएँ । कतिसँग प्रेममा परें ।
कतिले मलाइ छोडे, कतिलाई मैले छोडेहोला । सुरुवात यस्तै सामान्य भेटघाटबाटनै हुन्छ । कुनै दिन अचानक तपाईंलाइ उ वा उसलाई तपाईं मन पर्न थाल्छ, त्यसपछि सुरु हुन्छ पीरतीको नयाँ अध्याय ।
आफ्नै साथीका दाइकापनि साथी, प्रतिकसँग मेरो अफएयर चल्यो, बाहाना त सामान्य भेटघाटनै थियो नि ! त्यसभन्दा अगाडी पनि साथ दिएका, साथ लिएका, धोका पाएका,
धोका दिएका सबैको सामान्य भेटबाटबाटै सुरु भएको चिनजान र त्यसपछि माया‘ अनि त्यसपछि‘ जीवनका अनिगिन्ती ग-ल्तीहरु‘’ मैले बीचैमा उनलाई रोकेर सोधें, ‘होइन १ सबै त्यस्तो हुन्छन् भन्ने छैन नि ! के केटा र केटि राम्रो साथी हुन सक्दैनन् र ?
नाक फुलाएर उनी बोली, ‘सक्दैनन्, कदापी हुन्न त्यस्तो । केटा वा केटी राम्रो साथी हुन सक्ने भए यत्रा डि-भो-र्सका घ-ट-ना, यत्रा ब-ला-त्कार-का घ-ट-ना, ह “त्या” का घ-ट-ना कहाँ हुन्थे र ? केटा र केटि भनेको जातनै त्यस्तो हो,
फगत यौ-“न हो के”न्द्रबिन्दु मित्रताको, साथको ! अहँ म मान्दिन, त्यसो भए के म तिमीलाइ घरसम्म पुर्याउदैछु, के यो यौ-“न-का” लागि हो र ? तिमीलाई साथी सम्झेर जे जे गरें, के त्यो यौ “नका ला” गि थियो र ? मैले रि-सा-ए-झैं गरेर बोलें !
थिएन होला सायद ! तपाईं अ-प-वा-दमा पर्नुभो ! तर तपाईंको साथमा मैले त्यसरी सोचेकोपनि त हुन सक्छु ! तपाईं पुराना प्रेमीहरुलाई नभेट, उनीहरुसँग नबस भन्नुहुन्छ ? किन ? किनकि हामी बसेपछि यौ “न स” म्ब-न्ध हुन्छ ।
हो र म त्यसैका लागि उनीहरुलाई भेटिरहेको हुन्छु । एउटा केटा र केटि राम्रो साथी मात्र हुन्छन् भन्ने भित्री हृदयबाट सोच्नुहुन्छ भने किन नजा भन्नुहुन्छ मलाइ उनीहरुसँग भेट्न ?
एउटा साथीमात्र सम्झेको भए, तपाईंले म क “सैसँ” ग आज सु -ते-र आ-एँ भन्दा किन रिसाउनुहुन्छ ? कुनै केटा साथीले तपाईंलाइ आज मैले फलानो केटि “ला इ सु” ता एं भनेर भन्यो भने तपाईं उसलाई गा-ली ग-र्नु-हु-न्छ र ? उ बोलिरहँदा मैले बीचैमा रोकें !
हेर कुलो र कुरो जता मोडेपनि हुन्छ । तिमीहरुलाई उनीहरुले प्रयोग गरिरहेका छन् । बस् त्यति भन्न खोजेको । मैले त्यति भन्न नपाउंदै मेरा आँखामा पु-लु-क्क हेर्दै उनी बोली, ‘केटा र केटिबीच सम्बन्ध हुन्छ ।
तर किन सधैं केटि मान्छे प्रयोग भए भन्छ यो समाजले ? म एक्लो हुँदा कुनै वि-वा-हि-त मेरो पूर्व प्रेमीसँ “ग सु”-त्छु भने म होइन उ प्रयोग भएको छ । के हाम्रा चाहाना हुँदैनन् ?
उसले बोलीरहंदा मैले फेरी कुरा काटें, ‘होइन, चाहाना हुन्छ तर हरेक कुराको समय आउँछ ! मैले यति भन्नेबितिक्कै उनी फेरी झर्किएर बोली, ‘कहिले आउँछ ?
कि-शो-र अवस्थामा बल्ल बल्ल धा-न्छन् केटीहरु यौ-न-को ति-र्खा, ज “वानी ला” गेपछि के-के निहुँमा पिरोलिन्छन् । म किन यो समाजको यो खोक्रो आदर्शको परिधिमा बसौं ।
यदि यौ “न भ” नेकै विवाह पछी गर्ने हो भने, किन आफ्नै भातीजीको बाल्य अवस्थाको फैदा उठाएर भु-स्ति-ग्रे काकाहरु भाती “जी मा” थि यौ न ति- र्खा मे ताउँछन् ? यदि यौ “न आ” व-श्य-क छ भने किन पढाइसकेपछी विवाह भनेर परिधि बनाइयो त ?
पढेलेखेका नामामा किन बुझेनन् यो समाजका अगुवाहरुले,’ के “टिह” रुकोपनि चा-हा-ना हुन्छ‘ केटीहरु को पनि मु “जी हु” न्छ । ‘हैट के बोलेको बाटोमा ! ? म रि-सा-एँ ।
हो, यहि त हो बन्धन ! रातको समयमा म यहि समाजलाइ झु-क्का-ए-र, मेरो घरमा झु-क्का-ए-र क “सैसँ” ग रात वि-ता-उँ-छु र त्यो रातमा म मेरो पा “र्टनर” सँग यो बोल्छु भने त्यो ग-ल- त भएन, अनि बाटोमा आफ्ना रि स ह रु यसरी पोख्छु,
त्यो ग-ल-त भयो समाजलाई ! ‘त्यस्तो होइन के ! मैले सम्झाउन प्रयास गर्दा उनी फेरी झो-क्कि-ए-र बोली, ‘त्यस्तो नभए कस्तो त ! तपाईंजस्तै यो समाजका हरेक केटाहरुसँग यस्तो होइन र त्यस्तो होइन भन्ने तर्क त छ तर तर्क प-छा-डी-का कारण छैन ।
छ त बस् खो-क्रो तर्क ! मनलाग्दी तर्क, आफु अनुकुलको तर्क ! के त्यसो भए यौ “न भ” नेको खु-ल्ल-म-खु-ल्ला हुनुपर्ने चीज हो र ? मैले सोधें । ‘होइन, त्यो गो-प्य-नै हु-नु-प-र्छ । तर परिधि हुनुहुन्न ।
आज म तपाईंलाइ भनीरहेको छु, हिजो पनि म मेरो पू-र्व-प्रे-मी-सँग सु “तें” । उ विवाहित छ । म लाइ श-री-र-“को प्या” स छ । न त्यो बाहेक उसलाई मबाट केहि लिनु छ, न मलाइ केहि दिनु छ ।
तपाईं त्यस्तो नगर भन्नुहुन्छ तर विकल्प के त ? मैले भनेको छु, मसँग विवाहको बा-चा ग-र्नु-स्, अरु कसैसँग सुत्दिन । न मलाई तपाईं विकल्प दिन सक्नुहुन्छ न केहि ! अनि किन नजाउँ म मेरो श “री”रको प्या-स मे-ट्न ?
समाजलाइ, घरलाई, भाइलाई, मामुलाई झु-क्का-ए-कै छु त ! मैले के ग “ल्ती” गरें र ? ‘त्यसो भए विवाह गर न त ! मा-स्ट-र्स सकिन था-ली गो ! जागिर खाएकै छौ ! राम्री छौ !
सँगै हिंडे-र हो राम्रो लागेको ! म कस्तो छु मलाइ थाहा छ ! तपाईंले भनेजस्तै मलाई पनि विवाह गर्न मन लागेको हो । तर‘ ! ‘तर के ?
‘जति पढेपनि हाम्रो समाज अझै पनि पुरातनवादी छ ।
म मास्टर्स पढेकी केटि ! र-ज-श्व-ला हुनु कति स्वाभाविक हो भन्ने मलाइ थाहा छ । तर त्यहि र-ज-स्व-ला-मा कसैले के लगाईदिएको छ भनेर कार्तिक पहिलो साता घरमा पूजा राखेका छन् ।
कसैले खै कुन्नी के लगाईदिएको छ रे, हरेक दिन फुकेका चामलका केहि गेडाहरु खानुपर्छ मैले । किन ? ‘द-शा ला-गे-को छ, द-शा ! नमानौं भनेपनि यहि चामलका गेडाहरु खाना बि-र्सि-एर पो होकि भन्ने ड र छ ! त्यहि ड र भरिदिएको छ मलाइ यो समाजले !
होला नि त केहि ! यो संसारमा अदृश्य शक्ति त पक्कै छ पनि त होला ! मैले बोल्दा उसले ओ “ठ टो” के र जवाफ फर्काइ
‘खै, थियो भने त्यो दिन त्यहि अदृश्य शक्तिले किन रोक्न आएन ?
७-८ बर्षकी म फुच्ची-ला-ई आफ्नै काकाले ब-ला-“त्का-र” ग-रे-को थियो । कि-शो-र अवस्थाको खास उमेरमा ह ल्ल्क बढे को उ सको लि “ङ्ग, र” ज-श्व-ला समेत सुरु नभएकी मेरो ८ बर्षीय कलीलो ज्या-न-मा ज “वर”ज” स्त पी – डा दिएर उसले आ-फ्नो ति-र्खा मे-ट्यो
कति रु-“न खो”-जें त्यो दिन, कति दुखेको थियो ! कसलाई भन्ने ? बाबा बिते, आमा सँगै थिइनन्, त्यसमाथि का “का को ध” म्की र लो भ ! अनि भन्न नसक्नुको अ “र्को पी” डा ! भनेर पनि के गर्नु भन्ने अ “र्को पी” डा !
खै त त्यो अगाडी आफ्नै काकाबाट अ-सु-रक्षि-त हुन सकिन्छ भनेर मलाई चामलका गेडा कसले खु-वा-यो र ? रि स ले चु र भएर उनी बोली, ‘सा-ला-उ बेला आफ्नै अंकलको गेडा खानुपर्दा कसैले वास्ता गरेन ।
अहिले के-के भयो रे भनेर चामलका गेडा खानु पर्या छ ! २६ बर्षअघि बिहे गरे द “शा ला” ग्छ रे ! यहाँभन्दा द-शा के लाग्नु छ र ! अरुले देखेको थोरै नाम्ररो, भोगेका कयौं पीडाहरुभन्दा बढी हुँदा रहेछन् ! किन हो थाहा छैन !
कफी पसल आइपुग्यो ! ल ल बन्द गर अव यो कुरा, गएर कफी खाउँ ! टेबलमा बसेर उनी फेरी बोली, ‘ म यहाँसम्म कफी मात्र खान आएको हो र ? के मैले बोलेको सुन्न मन छैन हो ?
ए होइन, होइन ! तिम्रा सबै कुरा सुन्न न यहाँसम्म आएको हुँ ! साच्चै त्यो काका अहिले कहाँ छ ? खास त्यो दिन के भएको हो ? मैले सोधें ।
‘भन्दै थिएँ त ! रोक्नु भो ! अहिले उतै गाउँमा छन् !
अनि पछीसम्म कसैलाई भनेनौं यो कुरा ? ‘किन नभन्नु ! सबैलाई थाहा छ ! धेरैपछी आमालाई भनें ! मेरा सब साथीहरुलाई थाहा छ ! र आज तपाईंलाइ पनि भन्छु !
मामुलाई पनि थाहा छ ? म झ-स्कि-एँ ! ‘थाहा छ ! थाहा पाएको दिन के भयो, त्यो दिन काकाले मलाइ कसरी आफ्नो सि-“का-र ब”-ना-यो थाहा छ ? मैले मुन्टो हल्लाएँ ।
वरीपरी हेरी । हामी कुनाको क्याबिनमा थियौं ! आफुले लगाएको शर्ट थोरै प-ल्टा-“एर स्त”-न-को थोरै भाग दे-खा-उं-दै उनी बो-ल्न थालिन्,’ त्यो दिन
म आमा बन्नको लागि विवाह गर्दिन तर केटाहरुलाई भाडामा लिन्छु: सावित्री सुवेदी
२ दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, फोटो छोई ॐ लेखि सेयर गरौं !!!
६० बर्षको बु’ढा”हरुदेखि १४ बर्ष सम्मको ग्रा’ह”क भए हुन्छ ! कोहि भए फोटो छोएर म्यासेज…
खाना भन्दा से’क्स मन पराउने नायिका (फाेटाे फिचर)
रेखा थापा भन्छिन्ः मेरो शरीर भद्दा भयो त के भयो ?
काठमाडौंमा आफ्नै घर भएकी ३२ वर्षीया डिभोर्स बधुलाई वर चाहियो [सम्पर्क नम्बरसहित]
६० बर्षको बु’ढा”हरुदेखि १४ बर्ष सम्मको ग्रा’ह”क भए हुन्छ !…
काठमाडौंमा आफ्नै घर भएकी ३२ वर्षीया डिभोर्स बधुलाई वर चाहियो…
सु’हा’गरा’त कै भोलिपल्ट दुलहीले डि’भो’र्स ग’रिन् : कारण थाहा…
श्री ************************द्वारा संचालित
• Email: *************
• Phone: *************
.दर्ता नम्बर : ****************
६० बर्षको बु’ढा”हरुदेखि १४ बर्ष सम्मको ग्रा’ह”क भए हुन्छ…
काठमाडौंमा आफ्नै घर भएकी ३२ वर्षीया डिभोर्स बधुलाई वर…
© 2022 - Sidha Post 24. All Rights Reserved.